के SEO केस अध्ययन एक राम्रो मार्केटिंग उपकरण छ?
तथ्याङ्कहरूको अनुसार,90% भन्दा बढी ग्राहकहरूले यो मनपराउँछन् कि मिडिया सन्देश एक कहानी जस्तो लाग्छ. यो साबित भयो कि एक मान्य कथाले मानिसहरूलाई एक विशेष मुद्दा अझ राम्रो बुझ्न मद्दत गर्दछ. त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि वयस्कों पनि पछि रमाईलो लाग्ने महसुस हुन्छ जब सबै पछि कहिल्यै आनन्दित हुन्छ.
एसईओ मामला अध्ययन एक महान मार्केटिंग उपकरण हो. आज, सेमील्ट विशेषज्ञहरूले निम्न समाधानको बारेमा थप बताउनेछन्. लेख पढ्न पछि, तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाईं कसरी आफ्नो व्यवसाय मार्केट गर्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रकरण अध्ययन परिभाषा
एक केस अध्ययन एक शक्तिशाली उपकरण हो जुन तपाईले तपाइँको ग्राहकको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर व्याख्या गरी ग्राहकको समस्यामा विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।. एक मामला अध्ययन उन वेबसाइट मालिकों को लागि एक सही विकल्प हो जसको प्राथमिक लक्ष्य मान्छे को आफ्नो उत्पादनहरु र सेवाहरु लाई खरीदना छ. कुन कुराले अध्ययन अध्ययन गर्दछ त्यसो भए उनीहरूले तपाइँको व्यवसायको बारेमा सूचना सामग्रीसँग कथा कथा मिलाउन तरिका हो.
एसईओ मा केस अध्ययन को प्रयोग को मुख्य कारण के हो?
एसईओ केस स्टडी एक प्रभावी उपकरण प्रचार को लागि प्रचार
सबै भन्दा अनलाइन मार्केटर्स को वेबसाइटों मा प्रकाशन कोस अध्ययन को सुझाव दि्छ।. तथापि, तपाईं अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ र स्थानीय ग्राहकहरू वा पत्रिकामा प्रस्तुत गर्नका लागि अझ बढी ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंको प्रतिष्ठाको निर्माण गर्न अर्को ठूलो विकल्प तपाईंको उद्योगको लागि समर्पित केही स्रोतहरूमा तपाइँको मामला अध्ययन प्रस्तुत गर्न हो.
साथै, उद्योग-विशिष्ट लिङ्क गरिएको समूहमा विचार गर्नुहोस्. तिनीहरू अन्य मानिसहरूको साथ तपाईंको अनुभव साझा गर्नको लागि एकदम सही छन्. जस्तो भनिएको छ, साझेदारी गर्दैछ. मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई तपाईंको नि: शुल्क र उपयोगी जानकारी प्रदान गरेर विशेष महसुस गर्नुहोस्.
तपाइँ लिङ्कडेइन पल्समा तपाइँका मासिक अध्ययनलाई सजिलै प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ. यो साइटको प्लेटफार्मले प्रयोगकर्ताहरुलाई स्वयं प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ जुन त्यसपछि साझेदारी गर्न सकिन्छ. तपाईंको एसईओ को लागि एक अधिक महान विचार अवस्थित मामला अध्ययन को स्लाइड प्रस्तुति मा या एक संोग्राफिक मा साझा गर्न को लागि रिडोड को छ. तपाईं पूरा भएपछि, तपाईं यसलाई आफ्नो सामाजिक मिडिया खाताहरूमा साझा गर्न सक्नुहुन्छ.
यो उल्लेखनीय छ कि तपाईं सम्भावित र हालका ग्राहकहरूमा पठाउनको लागि तपाइँका मामला अध्ययनको सूचना सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।.
एक एसईओ प्रकरण अध्ययन
आदर्श रूप मा, तपाइँको मामला अध्ययन को शुरुवात, मध्य, र अन्त हुनु पर्छ. ध्यान राख्नुहोस्, कि केस अध्ययन सामान्यतया लामो र बढी मनोरञ्जन कथाहरू भन्दा बढी गहिरो हुन्छ. यसैले, उचित योजना कुञ्जी हो. अर्को पटक तपाइँ मामला अध्ययनको ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि निम्न अवयवहरू समावेश छन्:
छोटो र आकर्षक शीर्षक;
सम्भावित ग्राहक सामना गर्नुपर्ने समस्यामा गहिरो नजर;
तपाईंको व्यापार कसरी क्लाइन्टको समस्याहरू समाधान गर्दछ भन्ने एक व्याख्या;
प्रमाणहरू यसले देखाउँछ कि तपाईंको सेवा वा उत्पादनले ग्राहकलाई कसरी मद्दत गर्यो।
तपाईंको उत्पादन वा सेवामा फिर्ता सम्बन्धित कार्यमा कल गर्नुहोस्.
यो तपाईंसँग हो कि कुन स्टाइल एक अध्ययन अध्ययन गर्दा छनौट गर्ने छनौट गर्नुहोस्. कुन कुरा सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको मामला अध्ययनले समस्याको समाधानको अन्त्यमा अन्त्यमा समाधान गर्नुपर्छ.
रकम तिर्न, मामला अध्ययन एक शक्तिशाली उपकरण हो जुन तपाईंको एसईओ मा सुधार गर्न सकिन्छ. केस अध्ययनले तपाईंको सेवा वा उत्पादनको साथ काम गर्ने जस्तै के जस्तो गहिराइमा प्रदान गरेर अधिक संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ.
बधाई छ! अब तपाईं एक सम्भावित अवस्थामा अध्ययन अध्ययनको मूलभूत कुराहरू थाहा छ. सायद, यो तपाईंको आफ्नै कथा बताउन उच्च समय हो Source .